Abafazi abanomdlavuza wesibeleko okanye ngokuqinisekiswa kwemfuzo ekuqinisekisweni kwesi sifo akufanele bathathe i-contraceptive ye-hormonal. Ngakolunye uhlangothi, kodwa ngokubhekiselele kwizifundo ezininzi eRussia nakwamanye amazwe, ukuba uthatha i-COC (idibeneyo yokukhulelwa komlomo) kunye neminyaka emithathu ukuya kwemihlanu okanye ngaphezulu, umngcipheko we-endometrial kunye ne-cancer ye-uterine unciphise ngo-50%, umdlavuza we-ovariya ngowama-40%, kwaye amathuba athile omhlaza wekolon. Ngokutsho koogqirha - kwaye ininzi yabo ibhekisela kwiipilisi zokuzala ngokuthe tye, - ngokuthatha ixesha elide kwi-COC (Doctors), i-Mersilon, i-Logest, kunye nabanye), abasetyhini bangaphantsi kwama-40% amathuba okukhalaza nge-fibrocystic mastopathy. Kukho uluvo lokuba xa ungasifaki i pilisi, unamandla ngakumbi kwiimpawu ezikhuselekileyo zezi zi yobisi-ngaphandle kokuba ukhona, unobungozi ngemiphumo emibi yeCOC. Impembelelo ye-contraceptive ye-hormonal ekukhulelweni kwangaphambili ngumxholo oyintloko wale nqaku.
2. Xa uyeka ukuthatha iipilisi zokulawula ukuzalwa, umjikelezo wesini unokuyeka okanye uhambe kakubi.
Nqabile kakhulu. Ukuphazamiseka kwimijikelezo yokuya esikhathini kudla ngokudityaniswa neenguqu ze-satiotic kwi-endometrium. Oku kuya kwenzeka ukuba uthathe i-COC ubuncinane iminyaka emihlanu. Kule meko, oogqirha babonelela ngonyango lwe-estrogen, leyo, ngokusemthethweni, ngokukhawuleza ibuyisela umjikelezo. Njengoko uphando lubonisa, kuphela i-2% yabasetyhini abaneminyaka engama-18 ukuya kwe-20, okanye kwiminyaka engama-40-45 emva kokumisa i-COC yokuya kwinyanga kunokuthi ingabi ngaphezu kweenyanga ezintandathu-kwaye ngokuqhelekileyo aba bafazi banezinye iingxaki zempilo.
3. Iipilisi zokulawulwa kokuzalwa zingathathwa ngokufana nezinye iyeza
Hayi njalo. Ukongezelela, ezinye iziza-antibiotics - umzekelo, i-rifamnin, i-amoxicillin kunye ne-dockepticin-ukunciphisa ukusebenza kwe-contraceptive ngomlomo.
4. Ukuba uthatha i-hormonal contraceptives, ukutshaya kuyingozi kakhulu
Kwenene. Ukubhema i-cigarettes kwandisa umngcipheko weempembelelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zokukhulelwa kwe-hormonal - iingxaki nge-cardiovascular system. Unobungozi bokufumana imilenze ye-varicose, i-thrombosis, nokuba yinto ephazamisayo. Ukuba sele sele unengxaki kwimivenge yegazi, ubhema, uneminyaka engaphezu kwama-35 ubudala-khangela ezinye iindlela. Ngendlela, ukutshaya i-mariju ngelixa kuthatha i-COC ayingozi kunokuba i-cigarettes-iqulethe ubuncinci be-nicotine. Kodwa oku akuthethi ukuba i-marijuana iluncedo, - inciphisa ubuchule bobuchopho.
5. Awudingi ukuthatha iipilisi.
Ngexesha elifanayo lusuku, inyaniso. Kodwa ke zama ukunamathela kwisithuba se-12 ntsimbi, kungekho. Kukulungele ukubopha i pilisi kwizinto eziqhelekileyo ezinjengokuhlwa kwasekuseni.
6. Ukuthabatha amacwecwe, awukwazi ukusela isandi segrisi
Kwenene. Kulungile ukuyifake esikhundleni sayo nge-orange. Nangona i-juice ye-grapefruit ayinciphisi ukuphumelela kwe-contraceptive ye-hormone, ingatshintsha impendulo yomzimba kwi-estrogens okanye idibanise ne-enzyme ezichaphazela ukusebenza kwamachiza athile. Phakathi koogqirha, kukho uluvo lokuba ukuba uphuza ngaphezu kweziglasi ezimbini zejisi yamagilebhisi ngosuku, ezinye iimiphumo ezichaphazelekayo zokukhulelwa kwe-hormonal - umzekelo, intlungu kwiintlobo zezilwanyana ezincinci - zinokuqinisa.
7. Iipilisi zokulawula ukuzalwa aziqabile
Ukususela kwi-contraceptive yokuqala ye-hormonal bafazi baya kuzuza kwakhona, kodwa izidakamizwa zanamhlanje ziqukethe amancinci ama-hormone, kwaye, njengoko uphando lubonisa, akukho namnye kubo abafumana ubunzima kubo. Ngokuphambene noko, ezinye i-COC zize zenze igalelo ekulahlekeni kwesisindo. Kodwa izithintelo zokukhusela zingakhupha ukuqokelela kwamanzi kwiishubhu phambi kwenyanga, apho ubunzima bomzimba buyanda khona. Ngoko ke, ukuba unquma ukuzikhusela nge-COC, kubaluleke kakhulu ukufumana ipilisi yakho "yokuzikhethela" - ukukhetha idosi yamahomoni eziza kuhambelana nawe ngokuxhomekeka kwe-hormonal balance and health in general.
8. Emva kokufumana ixesha elide lokukhulelwa kwezilwanyana, kunzima ukukhulelwa
Akukaziwa. Abanye oogqirha banoluvo lokuba utshintsho lwe-atrophic kwinkqubo yokuzala ebangelwa i-hormonal contraceptive, kwaye yanciphisa ukuzala. Ngakolunye uhlangothi, ukukwazi ukukhulelwa ngeminyaka kuya kwehla ngaphandle kokukhulelwa. Uphando olutshanje lwezithandane eziyi-8 497 apho umfazi oyeka ukuthabatha iipilisi waza wagqiba ukukhulelwa kubonisa ukuba kulula ukukhulelwa umntwana ngomnyaka wokuqala wokumisa i-COC. Izizathu: ii-ovari ngexesha lokufumana iipilisi "ukuphumla", njengoko kungekho ncitshulwa, kunye nemvelaphi ye-hormone imele ibe ngumngcipheko we-endometriosis. Kwixesha elizayo elizayo eYurophu, iipilisi ezintsha ze-hormone ezine-folic acid kufuneka zithengiswe, eziya kubachazela abo bacinga ukuba ngumama malunga neenyanga ezintandathu.
Indlela yokukhusela ngayo
Iipilisi zokulawula ukuzalwa kwabantu sele zikhona! Oogqirha baseMerika baye baqinisekisa ukuba izidakamizwa ze-hormone uDepo-Provera, echazwe kwabasetyhini njengamajoni okukhulelwa (ayenzi ezine ngonyaka) ichaphazela abantu: inqanda ukwakheka kwesidoda, kodwa ayiyonakalisi i-orgasm. Abanye "abaviwa" -androgen-ukubuyisela iigel (Testim okanye AndroGel): sele sele ibonise iziphumo eziphumelelayo kwizilingo zeclini. Enyanisweni, ezi zilungiselelo azange zinikezelwe ilayisenisi - ngokukodwa, kuba xa bathatyathwa, ukuveliswa kwesidoda ngomzimba akuyeki kwi-100% kwaye kukho ithuba "lokuvuza". Ngoku ngoku ngamandla kunye nokuphambili kukho ukulinga ekudalweni kwesizukulwana esitsha sejel yokukhulelwa komntu, kodwa kuya kuhamba ngentengiso kwiminyaka elishumi. Izazi zezenkolo, ukuhlalutya imfuneko, yathi yokuqala yokulungela umthamo wesithwaba yindoda yayiza kuba yi-billionaire ngokukhawuleza.
9. Ngenxa yamacwecwe e-hormone, ufuna isini esincinci kwaye unentloko
Kwenene. Ezi ziphumo zecandelo le-COC azikhange zikhanselwe, kodwa, ngoogqirha, ngokuchanekileyo ukuqoqa iipilisi, le ngxaki ingakuphetshwa. Kukholelwa ukuba ezinye izithintelo zokukhulelwa kwe-hormonal zezizukulwana zokugqibela, ngokuchaseneyo, zinomphumo onobuncedo kwinkqubo yesantya kwaye zivuselele izifeshana zesini, kwaye zibuye zibe nefuthe lokuvuselela kwiinkqubo ezininzi zomzimba.
10. Iibhulethi yindlela ekhuselekileyo yokuzikhusela.
Ingxaki ephikisanayo. Kungekudala, iinjongo ze-hormonal zifumana ukuthandwa, isenzo esithatha iiveki ezi-8 ukuya ku-12 kuxhomekeke ekubunjweni-inhlanganisela ye-estrogen kunye neprogesin okanye kuphela iprogesin. Enyanisweni, iziphumo zophando zakutshanje zibonise ukuba iziphumo zecala zeenjini - umzekelo, iingxaki ngamathambo okanye ngesistim se-vascular - zinokuba namandla kunamacwecwe. Kwakhona kwiimarike zithintelo zokukhusela kunye nezindandatho zesisu. Bobabini kubo, emva kokubonisana nodokotela, bangasetyenziswa ngokuzimela, batshintshe nganye iintsuku ezisixhenxe. I-hormone-containing containing a case. Ngokuqhelekileyo kufakwa (ixesha lalo linyathelo lifikelela kwiminyaka emihlanu), kungekhona kakhulu ngenxa yokukhusela, kodwa ngeenjongo zokwelapha. Ndiza kuthi kwangoko - akukho zixhobo zokukhusela i-homeopathic. Ngenxa yokuba enye yemisebenzi ephambili ye-homeopathy kukugcina ukuzala, ukunceda umfazi ofuna kwaye kufuneka abele abantwana. Ukuba siphathwa zizigulane ezingenako ukukhulelwa, sibhekana nale ngxaki usebenzisa iziyobisi ze-homeopathic. Kodwa kwenzeka ukuba beza kuthi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, umfazi une-endometriosis okanye i-tumor. Uneminyaka engamashumi amane ubudala. Sekuyisikhathi eside evala abantwana. Siqala ukumphatha, kwaye ngokukhawuleza uyakhulelwa. Ummangaliso? Akukho senzakalo. Ndiya kuchaza ngale ndlela: amayeza asekhaya ayenayo imishanguzo kwindlela yokuqhelekileyo. Abayikubulala ama-microbes, asetyenziselwa ukutshintsha nayiphi na into engekhoyo emzimbeni. Kwi-homeopathy, akukho nonyango ye-tumor, okanye ibanda eliqhelekileyo, okanye ukungafani okufanayo. Injongo ye-homeopathy kukubuyisela ukulawulwa kwemvelo kwezo zonke iinkqubo zomzimba, kuquka ukulungelelanisa ukulinganisela kwe-hormone ukwenzela ukuba ibhinqa likwazi ukukhulelwa kalula. Ngaloo ndlela - kungekhona ukuba kubangele ukuba iziphumo ezingasayi kugwenywa kwiindlela zemveli zonyango, kubandakanywa ne-hormonal, apho ubunzima bezinto ezingqinelanayo. Ndiza kuthetha ezinye zazo: izifo zesifo se-mammary, isibindi kunye ne-biliary tract, thrombophlebitis, uxinzelelo lwegazi, i-rheumatism, isifo sikashukela.
Indlela yokulahla amabala amhlophe kumazinyo akho
Ukuphika: izilwanyana zabantu
Amandla amandla kunye nokukhuselwa kubo
Isobho se-spicy ne-chickpeas
Izindlela zokulahlekelwa isisindo samanina ekhaya
I-Rose njengeliyeza kunye namayeza alo
Ukubhiyozela uFebruwari 23 kwisikolo esiprayimari: vuyisana, imeko yeholide
Iingcebiso: indlela yokuvuselela intombazana
Izithethe zesondo zamanye amazwe
Yakha umfanekiso oveleleyo wehlobo kunye noLamoda noStlana Sovetov
I-tortilla okanye i-omelette yeSpeyin
Iingubo zezingane zeHalloween yinkwenkwana eyi-8-12 ubudala, eyenziwe ngezandla zakhe - iZombi, iPirate, Skeleton
Yonke inye: itekisi entsha yesetyenzisi kunye neyomsebenzi evela eBrabantia
Yintoni enokunika umntwana oneminyaka eyi-10 ubudala?